> Resource > Flash Drive > Sida loo Gadzhiyev Drive A USB in kale
USB Gadzhiyev oo dibadda Hard Drive in kale?
Hi, waxaan leeyahay laba USB Hard eryi; mid ka mid Western Digital 1.5 TB iyo Samsung 2 TB. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado hadii ay jirto hab kasta oo i Gadzhiyev karaa 1.5 TB in ay TB 2. My diraynaa waa in labadooduba ay yihiin via USB sidaas uma maleynayo barnaamij ay awoodi karto in iyaga lagu ogaado. Sidee baan u samayn?
Haddii aanu jirin file siecial ama boot aad USB, aad si fudud u nuqul ka karaa iyo xogta oo dhan ka USB 2 TB ka mid paste. Laakiin haddii ay USB ah Downlaods ku jiraan boot ama faylasha gaar ah, ma aad nuqul karo sidan oo kale, maxaa yeelay waxa ay ka dhigi doonaa files boot aad waxtar lahayn. Waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan qalab cloning USB gaar ah si ay u caawiyaan.
Sida Wondershare WinSuite 2012 , waa utility weyn oo Gadzhiyev USB ama drives kale adag u dhexeeya qoruhu ama cajaladaha oo aan wax khasaaro xogta ama dhaawac. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u isticmaali kartaa habka jeegga iyo 'reebi kor, xogta soo kabsaday, asturnaanta iyo ammaanka ilaalinaya, iyo ka badan, runtii xidhmo war ah oo wanaagsan u computer kasta.
Hadda, furaysto USB drives kuu geliyey kombiyuutarka, oo ay maamulaan barnaamijka. Gala in ay "Management Disk" menu oo waxaad heli doontaa interface ee soo socda. Markaas doortaan "Disk Dhan Gadzhiyev", kaas oo kuu ogolaanaya in aad Gadzhiyev disk oo dhan si kale.
Step1. Dooro USB drive isha
Dooro drive USB oo aad Wan in Gadzhiyev oo taga si "Next".
Step2. Dooro USB drive Ahaado
Dooro USB kale sida disk meel (Hubi drive USB aad xulan halkan uu leeyahay awood ka badan isha mid, ama in aad in aan loo oggolaan in ay sii wadi).
Step3. Bilow Gadzhiyev oo USB ah
Halkan waxaad ka heli doontaa fariin xusuusin in howlgalka socda overwrite doonaa content ee USB drive caga. Haddii aad ogolaato in ay sii wadaan, ku dhacay "Haa". Cloning USB wuxuu ku bilaabmaa.
Marka shaqada cloning ka baxayo, waxaa jiri doona a "guul gjærceler!" pop-up fariin, oo aad samaysay!
Video tutorial ah Gadzhiyev USB drive
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga USB muhim Flash Drive